Col. Nadaara, Taliye ku xigeenkii ciidanka booliska Puntland oo lagu aasay Garowe. – Radio Daljir
Luulyo 3, 2012 5:32 g 0
Garowe, July, 03 ? Allaha u naxariistee waxaa maantay aas qaran loogu sameeyay magaalada Garowe taliye ku xiggeenkii ciidanka booliska Puntland Col: C/llaahi Saalax (Nadaara) kaddib markii xalay ay dagar-qabayaal aan haybtooda la aqooni ku toogteen afaafka hore ee hotel Bulshaale oo ku yaala magaalada Garowe.
Aaska marxuunka ayaa waxaa maantay kasoo qayb-qaatay masuuliyiinta dawladda Puntland oo uu ugu horeeyo M/kuxiggeenka Puntland General C/samad Cali Shire, wasiiro, xildhibaanno, saraakiil amni, iyo qaybaha bulshada ee Garowe.
Warar madax-bannaan ayaa ku waramaya in maalintii shalay ahayd uu xilka ka qaaday marxuunka kuxiggeenka madaxwaynaha Puntland General C/samad, waxaana illaa xilligaan aan la aqoon jihada rasmiga ah ee ka dambaysa dilka marxuunka, inkastoo hay,adaha amnigu sheegeen inay wadaan baaritaanno lixaad leh.
Dawladda Puntland oo cambaaraysay dilkii Marxuun (Nadaara) tilmaamtayna inay gacanta kusoo dhigi-doonto dhagarqabayaashaasi.